युक्रेनका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग डा. बद्री केसीकाेआग्रह • Nepal's Trusted Digital Newspaperयुक्रेनका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग डा. बद्री केसीकाेआग्रह • Nepal's Trusted Digital Newspaper
युक्रेनका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग डा. बद्री केसीकाेआग्रह
मस्को । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धारको पहल गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएकाे छ ।
डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यहाँ रहेका ४०० जना नेपालीको उद्धारको पहलको लागि आग्रह गर्नुभएकाे हाे । ‘युद्द भनेको युद्द नै हो, त्यसैले नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सक्दो छिटो उद्दार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
हामी सरकार तथा त्यहाँ रहेका नेपालीबीच समन्वय गरि उद्धार गर्न तयार छौं । रसिया र युक्रेनबीचको द्वन्दमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरु त्रशित छन् ।
द्वन्दको बेला सर्वसाधारणमाथि हमला गरिने छैन् ‘ उल्लेख गरेका छन् । सैनिक अड्डाहरुमा मात्र आधुनिक क्षेप्यास्त्रले हमला गरिएकोले सर्बसाधारणको जिवनमा खासै खतरा छैन् भन्ने सरकारी दावी रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युक्रेनका पदाधिकारी साथीहरुले त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुसंग सम्पर्क रहदै आएको डा. केसीले जनाउनुभएकाे छ ।
केसीका अनुसार हाल सम्म त्यहाँ रहेका सबै नेपालीहरु सकुशल छन् । डा. केसीले स्वयं नेपाली दुताबास जर्मनी, रसिया तथा गैर आबासीय नेपाली संघ युक्रेनका पदाधिकारी र त्यहाँका नेपालीहरुसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर नेपालीको उद्धारको प्रयास गरेको बताउनुभयाे ।